Cesc Fabregas” ’90 daqiiqo Oo Difaac Ah Waa Is Miidaamin’ | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(21-2-2018) Laacibka dhexda uga ciyaara kooxda Chelsea ee Cesc Fabregas ayaa sheegay inay ahayd wax laga yaq-yaqsoodo, gacan sarayntii dhinaca kubbad haysashada ee kooxdiisu kala kulantay Barcelona, xataa iyaga oo ku sugan geggidooda Stamford Bridge, 16 dhamaadka tartanka Champions League is aragiisa koobaad.
Fabregas oo ciyaarta kadib la hadlay warbaahiyaha, BT Sport ayaa yidhi : “Runtii waa arin leh yax-yaxiisa. Waxaan filayaa inaanu ahayn kuwo qaab ciyaareed fiican soo bandhigay, waxaanu u xukunay hanaanka ciyaartu u socotay si aad u heer saraysa, waxaanu ahayn, xulafo, cufnaan iyo difaacasho bir ah, isugu dhiibanaynay kubada sidii koox, fursado badana waanu abuurnay – Willian waxay ahayd inuu dhaliyo saddexlay, laakiin ma dhicin oo garoonkayagii murugo ayaa naga qabsatay, bandhigii fiicnaana ma dhalin natiijo fiican.”
“Wali natiijadu waa mid furan, waxaanan muujinay inaan iska celin karno wax, waxa kaliya oo aanu u baahanahay inaanu lugta labaad qaab ciyaareedkan oo kale ku soo bandhigno Camp Nou si aanu u soo baxno.”
“Waa inaad lahaataa, dulqaad iyo adkaysi xushmayn ah oo aan cadho lahayn si aad ula ciyaarto koox sidan oo kale kubada gacanta kaaga haysay 70 % . Waa inaanu halkaas tagnaa (Camp Nou) anagoo weerar ah si aanu gool ugu dhashano, inaad 90 ka daqiiqoba difaac ku dhamaysataa maaha wax naga soconaya oo waa sidii qof ismiidaaminaya oo kale. Waa inaanu kubaddayada ciyaarnaa.”